कांग्रेस अब यसरी हिड्ला त? - हिमाल दैनिक
कांग्रेस अब यसरी हिड्ला त?
३० फाल्गुन २०७४, बुधबार ०९:३८
पछिल्लो आम निर्वाचनले दिएको अभिमतको आधारमा नेपाली कांग्रेसले छाँया सरकारको भूमिकामा रहेर सरकारका क्रियाकलापलाई नजिकबाट नियाल्ने रणनीति लिएको छ।
बाम गठबन्धनलाई तोडेर सत्तामा पुग्ने निरर्थक प्रयासमा कांग्रेस अलमलिन्छ कि? भन्ने आशंकाका साथ पनि केहीले कांग्रेसलाई हेरिरहेका थिए। तर, छाँया सरकारको भूमिका खेल्दै प्रभावकारी प्रतिपक्षीको रुपमा उभिने उसको योजनाले त्यो आशंकालाई असत्य सावित गरिदिएको छ।
नेपालको सन्दर्भमा कांग्रेसले जहिल्यै, जुनसुकै परिस्थितिमा पनि जनमतलाई स्वीकार्दै आएको छ। पार्टीले संस्थागत रुपमा निर्वाचन परिणामलाई अस्वीकार गरेको छैन। २०३७ को जनमत संग्रहको परिणाम, २०५४ को स्थानीय निर्वाचनको परिणाम, ०६४ को संबिधानसभाको परिणाम र पछिल्ला ३ वटा निर्वाचनका परिणाम कांग्रेसका लागि अप्रत्यासित र उसका लागि अत्यन्त नकारात्मक परिणाम थिए। तर पनि संस्थागत रुपमा कांग्रेसले ती सबै परिणामलाई स्वीकार्दै जनमतले दिएको भूमिकामा आफूलाई सिमित गर्‍यो। यो लोकतान्त्रिक संस्कृति देखाएको कांग्रेसका लागि अब प्रतिपक्षमै बसेर पनि लोकतान्त्रिक पद्दतिलाई मजवुत र प्रभावकारी बनाउने भूमिका खेल्न सकिन्छ भन्ने अवसर प्राप्त भएको छ।
प्रतिपक्षीय भूमिकाका लागि कांग्रेसले मुख्य रुपमा तिनवटा कुरामा बिशेष ध्यान दिएर काम गर्न आवश्यक छ।
पहिलोः संगठनको पुर्नसंरचना
दोस्रोः सबै तहका सरकारको काम कारबाहीहरुको नजिकबाट निगरानी र आवश्यकता अनुसार खबरदारी
तेस्रोः जनसम्पर्कमा बढी जोड
यी तीनवटा कुराहरुलाई केन्द्रबीन्दुमा राखेर कांग्रेसले अबको रणनीति बनाउन जरुरी छ। पार्टीलाई नयाँ ढंगले अगाडि बढाएर लैजानु पर्छ भन्ने आवाज पार्टीभित्र उठ्दै गर्दा र नयाँ पुस्ताको मतदाताले कांग्रेको विकल्पमा अर्को लोकतान्त्रिक शक्तिको खोजी गर्ने क्रममा भौतारिदै रहदाँ कांग्रेसले आफूलाई सुधार गर्न, सबै अट्ने बनाउन र जनताले मेरो पार्टी हो भन्ने अनुभूति दिलाउन योजनाका साथ अगाडि बढ्नै पर्दछ।
अन्यथा शिवरात्रीमा शिव पुज्ने र दशैँमा देवी पुज्ने संस्कारबाट हुर्केको नागरिक सधैँ कांग्रेस भनेर बसिराख्दैन भन्ने कांग्रेस नेतृत्वले बुझ्नै पर्दछ। विकल्प धेरै छन्। सबै विकल्पको समूचित सदूपयोग गर्नु पर्दछ भनेर हामीलाई हाम्रा धार्मिक ग्रन्थदेखि परम्पराहरुले सिकाँउदै आएका छन्।
कांग्रेसको आफ्नै विशेषता र चरित्र होला, जस्को तुलना अरुहरुसंग गर्न नमिल्ला। तर, ती विशेषता र चरित्र पनि सापेक्षिक हुन्छन् र सबै समयमा त्यही चरित्र र विशेषताले नै धानिखान गाह्रो पर्छ।
कांग्रेस अहिले यही द्वन्द्वमा छ। परम्परागत विशेषता र चरित्रलाई नै निरन्तरता दिने कि ती चरित्र र विशेषतालाई पुँजीको रुपमा स्वीकार्दै नविन संस्कार र संस्कृतिलाई आत्मसात गर्दै नयाँ दिशामा उन्मुख हुने? यो सवालको निर्णय कांग्रेसले एक मतका साथ जुन दिन गर्न सक्दछ, त्यसै दिनदेखि कांग्रेसको भविष्यका बारेमा जो कोहीले पनि भविष्यवाणी गर्न सक्दछ।
कांग्रेसको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी भनेको उसको संगठन परिचालन हुनै नसक्नु हो। पछिल्लो समयमा त पार्टीको गुट मात्र आंशिक रुपमा परिचालित हुने गरेको छ। उसको जनतासम्म बनेको पकड भनेकै उसले राष्ट्रिय राजनीतिमा खेलेको भूमिकाप्रति जनतामा जागेको विश्वास नै हो। जनतासंगको निरन्तर अन्तरक्रियाका लागि कांग्रेसको संगठनले काम गरेको देखिँदैन। पछिल्ला तीनवटा निर्वाचन हेर्दा कांग्रेसको संगठनले कुनै चुनावी कार्यक्रम दिन सकेन, उम्मेदवारले आफै तय गरेको कार्यक्रमका आधारमा पार्टी चुनाव लड्यो।
मुलुक संघीय संरचनामा गइसकेको छ र त्यसको अभ्यास प्रदेश र स्थानीय तहबाट सुरु भइसकेको छ। तर, कांग्रेको प्रदेश समिति नै छैन। पार्टीको नेतृत्व चुन्ने पक्रियाको प्रारम्भ गर्ने सक्रिय सदस्यहरुको अबस्था हेर्ने हो भने, परम्परागत र नेताका आसपासका धेरै छन्। योगदानको मुल्यांकन गरेर सदस्यता दिने प्रचलन कांग्रेसमा बस्न सकेकै छैन।
यी सबै पृष्ठभूमिमा अब कांग्रेसले आफ्नो संगठन मजवुत बनाउन विशेष ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ। संगठन बलियो बनाउनका लागि पार्टीका रणनीति, सिद्धान्त र उसले लिएका अडानका बारेमा मेची महाकालीका सदस्यहरुले एउटै भाषा बोल्ने गरी प्रशिक्षण दिनु, सामाजिक मुद्दाहरुमा स्थानीय रुपमै कांग्रेले अगुवाई गर्नु, जनताका गुनासाहरुको सम्बोधन गर्न अग्रसर हुनु जरुरी हुन्छ। यसो गर्दा जनताको आकर्षण उसकाप्रति बढेर जान्छ र संगठन मजबुद बनाउने उर्जा प्राप्त हुन्छ। संगठन भनेको संरचना मात्र होइन। त्यो संरचनाको निर्णयले शुभेच्छुक तथा अन्य नागरिकलाई पनि कुनै न कुनै रुपले प्रभावित तुल्याउने क्षमता पनि हो। कांग्रेससंग संरचना त छन् तर, ती संरचनाका निर्णयले जनतालाई प्रभावित पार्न सकिरहेको छैन। कांग्रेसले सांगठनिक जीवनलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने र ती संरचनाहरुलाई कसरी आकर्षक बनाउने भन्ने दुबै दृष्टिले सोच्नै पर्ने देखिन्छ।
अहिले कांग्रेसको संगठन सुधार गर्ने भनेको स्थानीय स्तरमा शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, वनको सदूपयोग तथा राज्यप्रदत्त सेवा सुविधामा नागरिकको पहुँच समान रुपमा भए–नभएको कुरामा राम्रो निगरानी गर्न सक्ने बनाउनु नै हो।
यसरी निगरानी थालियो भने संघीय संसदमा मात्र होइन, सबै तहको संसद र सरकारका भूमिकामाथी खबरदारी गर्ने आधार तयार हुन्छ। सबै तहका सरकारको कामहरुको नजिकबाट निगरानी र आवश्यकता अनुसार खबरदारी गर्ने क्षमता विकास गर्नु प्रतिपक्षमा रहेको कांग्रेसको अर्को दायित्व हो। त्यसका लागि रुचि र क्षमताका आधारमा मन्त्रालय र निकायको कामको अनुगमन गर्न निश्चित व्यक्तिलाई जिम्मा दिनु पर्दछ। छायाँ सरकारको अवधारणा स्थानीय सरकारसम्म पुराउने गरी संरचना निर्माण बनाइयो भने सरकारलाई खबरदारी गर्ने र आवश्यक परेमा रचनात्मक सहयोग गर्ने अवस्थाको निर्माण गर्न सकिन्छ।
हरेक तहमा हुने निर्णयहरु, निर्णय प्रक्रिया, त्यसमा प्रभाव पार्न खोज्ने स्वार्थ समूहका बारेमा जनकारी लिई आर्थिक र नीतिगत भ्रष्टाचारका संभावनाहरुका बारेमा चासो दिएर बस्ने, त्यसलाई सुधार्न दवाव दिने र त्यस्तो निर्णय भएमा वा हुँदैगरेमा जनतासामु त्यसलाई सार्वजनिक गर्ने तयारीका साथ कांग्रेसका संरचनाहरुले संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारलाई आफ्नो ‘घेराबन्दी’मा राखेर नियमन गर्न सक्नु पर्दछ। यसका लागि क्षमतावान, जानकार र यस्तो काम गर्न रुची राख्ने पात्रको छनौट भने हुनै पर्दछ। पार्टीभित्रको गुटको असर छाँया सरकारमा देखिन भने हुँदैन।
कांग्रेससँग जनताको एउटा गुनासो बढ्दो क्रममा छ। त्यो भनेको जनसम्पर्कमा उसले देखाएको उदाशीनता हो। सत्तामा रहदाँ कांग्रेसले जनसम्पर्क गर्ने दायित्वलाई भुलेकै हो। अब कांग्रेस जनतासँगको नियमित अन्तरक्रियामा जानै पर्दछ। नियमित अन्तरक्रियाका माध्यमवाट जनताका गुनासा, आवश्यकता, चाहनाहरुको सूची तयार गरी त्यसलाई सम्बोधन गर्ने रणनीति निर्माण गर्ने कामलाई अब बिपक्षीमा रहेको कांग्रेसले अभियानकै रुपमा थाल्न सक्नु पर्दछ। जनताका आवाजहरु सुनेर ती आवाजको सम्बोधनका लागि सरकारलाई दवाव दिने शक्ति हो कांग्रेस भनेर अब नयाँ पहिचान दिन पर्ने समय पनि कांग्रेसका लागि आइसकेको छ।
जनसम्पर्क बढाउने क्रममा, उसका संरचनाहरुले सांगठनिक जीवनसँगै सामाजिक मुद्दाहरुमा पनि नियमित छलफल गर्ने, श्रमदानका मार्फतबाट सर्वसाधारणसँग सहकार्यको संस्कृति बसाल्ने, सामाजिक परम्पराका कारण हुने विभेदहरुका विरुद्धमा संगठित अभियान थाल्ने, सांस्कृतिक र धार्मिक उत्सव तथा पर्वहरुलाई समाजोपयोगी बनाउन योजना निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्ने जस्ता रणनीतिहरु निर्माण गर्नेतर्फ कांग्रेस गम्भिर हुन सक्ने हो भने जनताको दैनिकीसँग राजनीतिकर्मलाई जोड्न सकिन्छ।
पछिल्लो समयमा राजनीति जुन ढंगले विकृत हुनु पुगेको छ, पैसावाला र वोलवालाका हातमा सिमित हुन पुगेको छ, त्यसवाट छुटकारा दिलाउँदै जनताका जीवनसँग जोडिएको शास्त्रका रुपमा राजनीतिलाई जोड्ने र राजनीतिकर्मको परिणाम जनहितमा ल्याउने परिस्थिति निर्माणका लागि पनि राजनीति र जनतावीचको सम्बन्ध प्रगाड बनाउनु पर्ने छ।
यो आवश्यकतालाई बोध गर्दै राजनीतिलाई सही मार्गमा लैजाने दायित्व बहन गर्न लोकतान्त्रिक शक्तिले मात्र सक्छ। आफूलाई लोकतन्त्रको प्रमुख नेतृत्वकर्ता ठान्ने कांग्रेस अब प्रतिपक्षमा रहदा गर्नु पर्ने यस्ता धेरै कामहरु छन्, जस्ले फेरि पनि नेपाली समाजका लागि आवश्यक शक्ति कांग्रेस नै हो भन्ने महसुस नागरिकहरुलाई गराउन सक्दछ। कांग्रेसले आफूलाई यस्तो चेतका साथ हिँडाउन चाह्यो र हिडाँउन थाल्यो भने प्रतिपक्षी भूमिका निर्वाहलाई प्रभावकारी बनाउँदै आफ्नो पुनर्यौवनका लागि पनि महत्वपूर्ण कदम हुने छ।
पार्टीलाई पुर्नजीवन होइन पुनर्यौवनिकरणको आवश्यकता छ
Prevपछिल्लोविवादमा प्रधानन्यायाधीश, राष्ट्रपतिको शपथ कोबाट?
अघिल्लोसंसदीय शैलीबारे कांग्रेस सांसदलाई प्रशिक्षणNext